यी तिन युबक जसले गरे यस्तो काम , झोलामा ल्याएको बस्तु हेर्दा प्रहरी नै जिल्ल खाए !
कार्तिक १२, २०७८ शुक्रबार 61
बुटवल– रुपन्देही प्रहरीले प्रतिबन्धित ला’गूऔ’ष’धसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही मातहत इलाका प्रहरी कार्यालय रुद्रपुरबाट खटिएको टोलीले नौ सय ग्राम ब्राउनसुगरसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा रुपन्देहीको कन्चन गाउँपालिका ४ प्रगतीटोल बस्ने २९ वर्षीय नरेन्द्रकुमार दर्जी, कन्चन–५ बस्ने ३१ वर्षीय मोहन सुनार र कन्चन–४ का ३४ वर्षीय प्रदीप पुन रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सत्यनारायण थापाले बताए । पक्राउ परेका तीनै जनालाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट म्याद थपको अनुमति लिई ला’गूऔ’ष’ध कारोबार ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले बताए ।
यो पनि, धानमा क्षति बेहोरेका किसानलाई सरकारले ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने सरकारले वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोकिएको क्षेत्रफलका आधारमा साना, मध्यम र ठूला किसान वर्गीकरण गरी २० देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको हो ।
उहाँले नेपाल सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी उक्त राहत दिइने पनि जानकारी गराउनुभयो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनउने र उक्त कार्यदलले पाँच दिनभित्र कार्यविधि बनाई स्वीकृ्तिका लागि पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
Prevअस्पतालमा बच्चा जन्माउने क्रममा बच्चाको टाउको डाक्टरको हा’तमा, शरीर ग’र्भमै छु’ट्यो!
Nextफेसबुकको नाम परिवतन नयाँ नाम अब ‘मेटा’
गुल्मीमा प,हिरोले घर पुरिँदा तीन दिदी-बहिनीको मृ,त्यु
आगोलागीमा परि देउवा को मृत्यु